नेपाल आज | नेपालका कम्युनिष्टको विश्वास छैन, अमेरिका र चीनपनि असन्तुष्ट ( भिडियोसहित)
नेपालका कम्युनिष्टको विश्वास छैन, अमेरिका र चीनपनि असन्तुष्ट ( भिडियोसहित)
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम नेपाल जन सम्र्पक समिति अमेरिकाका सभापति आनन्द विष्ट भन्छन्, ‘ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अमेरिका गएकाबेला लुकेर बसे । लुकीलुकी भ्रमण गरे । उनले त्यहाँ रहेका नेपालीहरुसंग भेटघाट अन्तक्रिया केही गरेनन् । यो सबैको कारण द्वन्द्वकालमा उनले गरेको कर्तुत थियो । कतै आफूलाई पक्राउ गरि हाल्छन् कि भन्ने त्रास उनीमा थियो । यो त्रास अहिले पनि छ ।’
अमेरिकाले संसारभरका कम्युनिष्टप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्छ । अझ नेपालका कम्युनिष्टप्रति अमेरिकाको दृष्टिकोण राम्रो छैन । अझ नेपाल सरकार र नेकपाले चीनसंग विशेष सम्बन्ध स्थापित गरेपछि चीन झस्किएको छ । अमेरिकाले नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो भनेर आधिकारिक धारणा नै बनाइसकेको छ । चीन र अमेरिकाबीच सम्बन्ध बिग्रिरहेकाबेला नेपालको चीन ढल्काइ महंगो पर्न सक्छ ।
रोचक कुरा के छ भने नेकपा र अहिलेको सरकारले चीन मोह देखाउन खोजे पनि यीनिहरुलाई चीनले पनि विश्वास गरेको छैन । राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफनो भ्रमणका दौरान यीनिहरुलाई नङग्याएका छन् । सम्पत्ति थुपार्ने, भ्रष्टाचार गर्ने लगायतका विषय उठाएर राष्ट्रपति सीले शालिन ढंगले यीनलाई झापड हानेका छन् ।
साथै, चीनविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई धूलोपीठो पारिन्छ भनेर राष्ट्रपति सीले यही भूमीबाट किन भने ? किनभने यहाँ चीनविरोधी शक्तिबाट नेकपाका केही नेताहरु निर्देशित छन् । उनीहरु आफू पनि त्यो काममा लागेका छन् र त्यस्ता शक्तिहरुसंग साँगगाँठ पनि गरिरहेका छन् । यो कुरा थाहा पाएरै उनले निर्मम वचन बोलेका हुन् । यीनिहरुको द्वेध चरित्रसंग राष्ट्रपति सी परिचित भएकाले चीनले सम्पूर्णरुपमा यीनिहरुलाई सघाउँछ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिदैन ।
‘राष्ट्रपति सीले नेपालमा जुनसुकै सरकार आएपनि चीनले समान व्यवहार गर्ने भनेर स्पष्ट पारिसकेका छन् । यसकारण दुई देशका पार्टीबीच जे जस्तो सम्झौता भएपनि फरक पर्दैन । सीले त कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई चीन भ्रमणमै बोलाइसके । कांग्रेससंग पनि चीनले विशेष सम्बन्ध राख्न चाहेको यसबाट पुष्टि हुँदैन र ? ’ नेता विष्टको तर्क छ ।
विदेशीको इशारामा चल्ने भनेको कम्युनिष्ट नेता मात्र हुन् । बाहिरबाट हेर्दा राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, देशभक्तिका दर्शन छाट्ने तर भित्रभित्र चाकडी गर्ने, विदेशीको पैसा खाएर दास हुने यीनिहरुको चरित्र हो । यो कुरा महाकाली सन्धी, होली वाइनदेखि ‘बिआरआई’ परियोजनासम्म पुग्दा छताछुल्ल भैसकेको छ ।
अब नेपाललाई सही मार्गमा अघि लैजाने भनेको कांग्रेसले मात्र हो । अहिले कांग्रेस नेताहरुलाई एकपछि अर्को आरोप लगाएर फसाउन खोजिदैछ । तर, सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर छेकिदैन । आफना कर्तुत ढाकछोप गर्न कांग्रेसमाथि आरोप लगाएर केही हुनेवाला छैन । जनताले सबैकुरा बुझिसकेका छन् । आगामी चुनावमा सबै हिसाबकिताब जनताले गर्छन् ।